Olubomvu noBlue, imibala emibini eya kwenza ukuba ube nobuchule ngakumbi kwaye ukrelekrele | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Unokufuna ukucinga kabini ngaphambi kokukhupha amakhulu eeyuro kwikhosi yakho elandelayoIzazinzulu zikholelwa ukuba ikhona indlela elula yokunyusa ubukrelekrele kunye nobuchule. Olubomvu noBlue kunokubizwa ngokuba luvavanyo.
Abaphandi boMbutho waseMelika woPhuculo lweNzululwazi (Umbutho waseMelika woPhuculo lweNzululwazi) wafumanisa ukuba ukuvezwa nje kwimibala emibini kunokunceda ukuphucula inkumbulo yakho kunye nokukwazi ukwenza izinto ezintsha.
Isifundo esenziwe nguJuliet Zhu
Kwisifundo esasikhokelwa nguNjingalwazi uJuliet Zhu, iqela labonisa abathathi-nxaxheba ngemisebenzi eyahlukeneyo efuna ukuba bayile okanye bamamele. Imiceli mngeni yenziwa kwiikhompyuter ezinemvelaphi ebomvu okanye eblowu. Njengoko kwafumanekayo, abaphenduli abasebenza kwiikhompyuter ezinemvelaphi ebomvu benza ngcono kwimisebenzi efuna ingqalelo yabo, ngelixa abaphenduli ababesebenza kwiikhompyuter ezinemvelaphi eluhlaza okwesibhakabhaka bafumana amanqaku aphindwe kabini kunawokuyila.
Akucaci ukuba kutheni le mibala inale misebenzi ikhethekileyoKodwa eli qela linethiyori: "Enkosi ngokumisa imiqondiso, izithuthi ezingxamisekileyo kunye neepeni ezibomvu zootitshala, sidibanisa obomvu nobungozi, iimpazamo kunye nokulumkisa," watsho uNjingalwazi Zhu. Umbala, ke, ubangela ukuba ingqondo ihoye ngakumbi kwaye ilumke.
Kwelinye icala, i-serene eluhlaza okwesibhakabhaka iyabakhulula abantu kwaye inxulumene nenkuthazo elungileyo.
«Ngenxa yokuba i-blue ngokubanzi inxulunyaniswa nokuvuleka, uxolo nokuzola, kusenokwenzeka ukuba kusebenze inkuthazo yokufikelela ebantwini, kuba le mibutho ibonisa indawo enobungozi ekhuthaza abantu ukuba basebenzise ingxaki yokuyila, ngokuchaseneyo nezisombululo 'ezizizo nezinyanisekileyo', utshilo uZhu.
Ukuphela kokuthatha kolu phando-Ukuba ufuna ukucinga ngokunzulu, zama ukusebenzisa iphepha lodonga elibomvu kwidesktop yakho okanye kwifowuni. Ukuba ufuna ukucinga ngengqondo, iphepha lodonga eliluhlaza linokukunceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Olubomvu noBlue, imibala emibini eya kukwenza ube nobuchule ngakumbi kwaye ubukrelekrele
Ukurisayikilisha kunye nosihlalo wombhobho nguChristophe Machet